मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः काठमाडौंका खाल्डाको गीत कति सुन्ने ? - हाम्रो देश
मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः काठमाडौंका खाल्डाको गीत कति सुन्ने ?
५ मङ्सिर २०७६
५ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंका सडकका खाल्डाखुल्डी चार महिनाभित्र पुरिसक्न निर्देशन दिएका छन् ।
पुर्नगठित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवार निकायलाई आफ्नो काम गर्न निर्देशन दिए । ‘यो काठमाडौंको खाल्डाको गीत कति सुन्ने ?
जहिले सुन्यो त्यही सारंगी बज्छ । टेलिभिजन खोल्यो उही सारंगी, रेडियो खोल्यो उही सारंगी, अनलाइन हेर्‍यो उनी सारंगी’ उनले भने, ‘यो किन समाप्त नपर्ने ? यो चौमासिक भित्र काठमाडौंका खाल्डा सबै समाप्त हुनुपर्छ । कसको जिम्मेवारी हो, उसले पुरा गर्नुपर्‍यो ।’